Dhizaini uye zviyero zveiyo iPhone 7 zvakasimbiswa | IPhone nhau
Kutsva kutsva kunosimbisa dhizaini uye zviyero zveiyo iPhone 7 (uye haizotaridzika seBender)
Muna Chivabvu, isu tatoverenga uye tikaburitsa makuhwa mazhinji nezve iyo iPhone 7. Idzi mbiri dzakanyanya kutaurwa nezvadzo kubviswa kweiyo headphone chiteshi uye mbiri lensera kamera. Chandaifarira zvishoma nezve mukana wekuti iyo iPhone 7 yaive nekaviri kamera yaive dhizaini yaive yakareba gomba yaionekera yakabuda, ndosaka mifananidzo iri kutenderera ichienzanisa iyo fungidziro iPhone 7 naBender, iro rakakurumbira robhoti kubva kuFuturama nhevedzano. Asi, sekubuda kwazvino kuburitsa, izvo hazvizove dhizaini yeinotevera iPhone.
Vezvenhau veFrance NoWhereElse, uyo atobudirira kusefa zvinhu zvakawanda zvemidziyo yemhando ipi neipi, atumira yechipiri kupa iyo inosimbisa dhizaini uye zviyero zvandakanga ndatoburitsa mwedzi wapfuura. Pasina kupokana, chinonyanya kurova i gomba rekamera rakakura kwazvo kupfuura iyo yeiyo iPhone 6s, izvo zvaizoratidza kuti kamera ichasanganisira shanduko uye hazvitongwe kunze kuti malenzi maviri akambotaurwa nezvayo mumwedzi yapfuura anogona kukwana mugomba iro.
Iyo iPhone 7 ichave iine yakakura kamera
Uyezve, iro gomba rekamera zvakare iri padyo nemupendero pane iyo iPhone 6s uye yaizonamira kunze zvishoma, izvo zvaizobvumidza iyo mhete yekamera kuti isaratidze zvakanyanya senge iri pane iyo iPhone 6 uye iPhone 6s (chimwe chinhu chandinofunga kuti vaifanira kunge vakaita makore maviri apfuura).
Mukutaura kwematanho, iyo iPhone 7 iri mumufananidzo yaigona kuyera 138,30mm kukwirira x 67.12mm yakafara, inova saizi chaiyo yakafanana neiyo iPhone 6s. Mumufananidzo kukora kwayo hakuonekwe, asi masosi anovimbisa kuti akafanana neiyo iPhone 6s kana yakatetepa zvishoma, zvekuti haizoonekwa.
Izvo NoWhereElse isingataure uye ndinoita senge ndisiri kuona ndiro gomba remufoni. Buri reMheni rinogona kuoneka, asi iyo 3.5mm jack haina kukosheswa. Chero zvazviri, isu tiri kutaura nezve 3D modhi inogona kunge isipo ruzivo. Senguva dzose, kuziva kuti dhizaini yekupedzisira yeiyo iPhone 7 yakaita sei, isu tichafanirwa kumirira kusvika munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Kutsva kutsva kunosimbisa dhizaini uye zviyero zveiyo iPhone 7 (uye haizotaridzika seBender)
Bhatani remagetsi rinoratidzika kunge risingaonekwe mumufananidzo iwoyo, handiti?
Mhoro Sergio. Zvakanaka, wakarurama. Hongu unogona kuona vhoriyamu uye mbeveve switch, asi iyo off switch haioneke.
Mc famba. akadaro
Iko kudzima hakuchazove bhatani asi kumisikidzwa nenzwi.
Pindura Mc bhururuka.
Ehe, zvinotaridzika ... tarisa zvakanaka.
Gersam Garcia akadaro
Zvinosimbiswa here? Vakomana, hazvisi zvechinhu pasina, asi hazvifanirwe kutaurwa kuti chimwe chinhu chinosimbiswa neicho chokwadi chekudonha icho chisiri chinhu kunze kwerunyerekupe rwakawanda ... Iwe unoisa "zvinosimbiswa", asi zvino posvo yacho yakanyorwa zvine mutsindo, uye iwe pedza kutaura kuti isu tichafanirwa kumirira Gunyana….
Pindura Gersam García
Apple inosangana nevakawanda podcasters kuti vanzwe zvavanonetseka
Podcast 7x08: iPhone kana iPhones?